BBC oo ka jawaabtay cabasho uga timid Muxumed Anni - BBC News Somali
BBC oo ka jawaabtay cabasho uga timid Muxumed Anni
BBC oo ka jawaabtay cabasho uga timid maxbuus hore oo ka qaybqaatay dood ay qabatay
Maraykanka oo soo dhaweeyay ciwaannada uu Facebook xiray
Shaqaale caafimaad oo Maraykanka ku cunsurieeyay haweenay dhimanaysa
Xisbiga Zanu-PF oo hoggaaminaya natiijada doorashada
Rakaab si mucjiso ah uga baxay diyaarad gubatay
Booliska rabshadaha ka hortaggo oo lagu daadiyay magaalada Harare
Posted at 17:26 1 Aug
Posted at 15:49 1 Aug
'Militariga Zimbabwe waxay dileen shan qof '
Dibadbaxyada rabshada wata ee ka socda dalka Zimbabwe
Patson Dzamara oo u doodo arrimaha xuquuqul insaanka dalka Zimbabwe ayaa sheegay in shan qof ay ciidammada militariga ku toogteen gudaha magaalada Harare.
Wuxuu intaasi ku daray in arrin laga xumaado ay tahay in dad rayid ah la dilo.
Balse ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya dilkan.
Taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka Neslson Chamisa waxay diideen inay aqbalaan natiijada doorashada baarlamaanka oo ay guddiga doorashada sheegeen in xisbiga talada haya uu kuraasta inta badan ku guulaystay.
Posted at 15:20 1 Aug
Militari lagu arkaya waddooyinka Harare
Gawaarida gaashaaman ee militariga ayaa lagu arkaya waddooyinka magaalada Harare ee caasimadda Zimbabwe. sida uu kusoo warramaya weriyaha BBC ee magaalada Harare.
Waxaa sidoo kale lagu arkaya hawada Harere diyaaradaha khumaatiga u kaca ee Helikoptarka.
Wararka qaar waxay sheegayaan in ciidammo wajiga soo dabooshay ay dadka garaacayaan.
Posted at 14:59 1 Aug
Sawirro: Qalalaase ka taagan Harare
Magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe waxaa ka taagan xaalad jahwareer ah kaddib markii waddooyinka Harere lagu arkayay dad dhigayay dibadbaxyo rabshado wato.
Dibadbaxyaasha qaar ayaa sidoo kale gubay sawirka madaxweyne Emmerson Mnangagwa.
Meela qaar ayaa laga maqlaya rasaas, sida uu u kusoo warramaya weriyaha BBC-da ee ku sugan Harare.
Baabuur bas ah oo la sheegay inay ololaha doorashada u isticmaalayeen xisbiga Zanu-PF ayaa sidoo kale dab lagu qabadsiiyay gudaha magaalada Harare.
Posted at 14:37 1 Aug
Nelson Chamisa oo sheegay inuu ku guulaystay doorashada
Nelson Chamisa wuxuu noqday hoggaamiyaha ugu wayn mucaaradka dalka Zimbabwe kaddib geeridii ku timid Morgan Tsvangira bishii February
Hoggaamiyaha mucaaradka Zimbabwe Nelson Chamisa ayaa ku adkaysanayaa inuu ku guulaystay doorashadii Isniintii dalkaasi ka dhacday.
Qoraal uu bartiisa Twitter-ka kusoo qoray “ waxaan ku guulaysanay codad badan, waxaad u codayseen inaad heshaan isbaddalo, si wadajir ah ayaan ugu guulaysanay, wax isdaba marin ah saamayn kuma yeelan doonto in aan gaarno safarkeena”
Posted at 13:31 1 Aug
Booliska Kinshasa oo kala ceyriyay tageerayaasha Bemba oo isu soo bax dhigayay
Jean-Pierre Bemba wuxuu tobban sanno ku xirnaa xabsi ku yaalla Hague
Booliska dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sunta dadka ka ilimaysiisa ku kala cayriyay tageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Jean-Pierre Bemba.
Tageerayaasha ayaa dibadbax ka dhigayay magaalada caasimadda ah ee Kinshasa.
Bemba ayaa doonaya inuu tartamo xilka madaxtinimo.
Kumannaan kamid ah tageerayaashiisa ayaa isu soo bax ka dhigay waddooyinka Kinshasa si ay usoo dhaweeyaan Bemba kaddib markii maxkamadda dambiyada caalamiga ay meesha ka saartay dacwad loo haystay oo ahayd inuu gaystay dambiyo dagaal.
Posted at 12:37 1 Aug
Booliska ka hortaggo rabshadaha ayaa lagu arkayay iyagoo dhoobaan xarunta wayn ee guddiga doorshada dalka Zimbabwe sii loo xaqiijiyo ammaanka xaruntaasi oo la filayo in looga dhawaaqo natiijada doorashada.
Guddiga doorashada Zimbabwe ayaa bilaabay inay shaaca ka qaadaan natiijadii ugu dambaysay ee doorashada baarlamaanka.
Weli ma cadda inay shaaca ka qaadi doonan doorashada madaxtinimada iyo in kale.
Weriye ka tirsan Al Jazeera ayaa barteeda Twitter-ka kusoo bandhigtay boolis badan oo ku sugan agagaarka xaunta guddiga doorashada.
Posted at 12:09 1 Aug
Mugabe oo “dhibaato u gaystay” mucaaradka Zimbabwe
Masuul sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ka ah Zimbabwe ee MDC ayaa sheegay in eedeen taageeradii uu madaxweynihii hore Robert Mugabe u muujiyay Nelson Chamisa oo ah murashaxooda.
Wariyaha BBC-da uga soo warramaya magaalada Harare ayaa hadaladii masuulkaas witterka soo dhigay.
Posted at 11:43 1 Aug
Diyaarad sidday rakaab ayaa ku burburtay gobolka Durango ee ku yaalla dalka Mexico saacado uun kaddib markii ay garoonka ka duushay.
Dhammaan rakaabka oo gaarayay 103 qof ayaa ka badbaaday shilka balse 97 kamid ah rakaabka ayaa dhaawacyo soo gaaray.
Barasaabka gobolka uu shilka ka dhacay ayaa sheegay in diyaaradda ay ku dhufutay dabayl xooggan islamarkaasna ay baalasheeda dhulka dhigatay.
Rakaabka diyaaradda ayaa uu suuro gashay inay ka baxaan diyaaradda ka hor inta aanu dabka qabsanin.
Posted at 11:36 1 Aug
Masuuiyiinta guddiga doorashada ee dalka Zimbabwe ayaa sheegay in xisbiga talada haya ee Zannu-PF uu ku guulaystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka.
Natiijada ayaa wali soo baxaysa, laakiin Zanu-PF ayaa hadda ku guulaysatay in kabadan kala bar kuraasta baarlamaanka, waxaana macquul ah in ay helaan saddex meeloodow labo.
Laakiin ilaa iyo hadda wax war ah lagama hayo doorashadii madaxweynenimada, laakiin kormeereyaal ajaaniib ah iyo dublamaasiyiin ayaa ka digay in laga yaabo in ay isu dhawaadaan, ayna arrintaasi tijaabo u tahay dimuqraadiyadda curdanka ah ee dalka.
Xulafada mucaaradka ah ee MDC ayaa horay u sheegay in codadka lagu shubtay, balse caddaymo xoog leh lama aysan imaanin.
Hadda arrimahan badankood waxay ku xiran yihiin natiijada kama dambaysta ah iyo waxyaabaha ay doorashada ka sheegaan kormeerayaasha madaxa bannaan ee doorashada la socda.
Zanu-PF ayaa awoodda dalka Zimbabwe haysay tan iyo markii uu dalkaasi xornimada qaatay 1980kii.
5.6 milyan oo ruux oo reer Zimbabwe ah ayaa isu diiwaan galiyay codaynta doorashada
Posted at 11:00 1 Aug
Nin ICC ku wayday dambiyo dagaal oo dib ugu laabtay DR Congo
Hogaamiyihii hore ee jabhadda Jean-Pierre Bemba ayaa ka dagay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, ka dib markii ay wax dambi ah ku wayday maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee ICC.
Bemba ayaa wacad ku maray in uu isu sharixi doono doorashada madaxweynenimada ee bisha soo socota ee Disembar.
Waxaa lagu xiray Belgium sannadkii 2008, wuxuu hardan dheer u galay in uu magaciisa ka ka nadiifiyo ICC.
Taageereyaasha Bemba ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee Kinshasa, si ay u soo dhaweeyaan isaga, weriyaha BBC Anne Soy ayaa Twitterkan soo dhigay.
Posted at 9:49 1 Aug
Waxaa laanta af Soomaaliga ee BBC soo gaaray cabasho la xiriirta dood ku saabsanayd tacaddiyo ay Hay’adda Human Rights Watch sheegtay inay ka dhaceen xabsiga Dhexe ee Jigjiga (“Jeel Ogaadeen”) ee Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya, taas oo baxday taariikhdu markay ahayd 6 Luulyo 2018.
Cabashadu waxay ahayd, in uu doodda ka qeybqaatay nin horey maxabuus u ahaa, kaas oo la sheegay in la qasbay, arrintaas oo la sheegay inay halis gelisay noolashiisa.
BBC-du waxay ku dadaashaa inay si buuxda u raacdo xeerarka saxaafadeed ee ay dhigatay, kuwaas oo ay ugu muhimsan yihiin xaqiiqada, dhexhdexaadnimada, madaxbanaanida iyo caddaaladda.Dantanadu waxay tahay in aan dhageystayaasha u gudbino doodo macquul ah oo dadka wax u soo kordhiya.
Markay cabashada na soo gaartay, tafatirayaasha laanta iyo mas’uuliyiinta BBC-da waxay dib-u-eegid ku sameeyeen barnaamijka laga cawday, waxaana nasiib darro ah inaan ogaanay in howlwadeennaadii maalintaas aanay raacin habdhaqanka laanta Af Soomaaliga ee BBC, waxaana la helay caddeymo muujinaaya in Muxumad Ani, oo doodda ka qeyb-qaatay uusan ku sugneyn xaalad uu si xor ah fikirkiisa uga dhiiban karay.
Waxaan ku dadaalnaa inaan sameyno barnaamijyo ceeb ka saliimah, balse mararka qaar khalad wuu dhacaa, siiba marka la sameynayo barnaamijyo toos ah, oo ay ka qeyb-qaatayaasha qaar ay waddamo kala duwan joogaan.
Marka uu khalad dhaco, sida tan oo kale, waan cudur-daarannaa, cashar ayaanan ka barannaa. Haatan barnaamijkaas baraheenna internetka iyo bulshada waan ka saarnay, waxaanan la hadalnay soo saarayaashii ku howlanaa arrinkan.
Waxaan sidoo kale dib-u-eegid ku sameyn doonnaa xilliyada ay macquulka tahay in lala hadlo dadka ku hoos nool maammullada lagu eedeeyo xadgudubyo ka dhan ah aadanaha.
Sidaas darteed, waxaan cudur-daar u gudbineynaa Muxumed Cabdullaahi Guuleed (Muxumed Anni), qoyskiisa, qaraabadiisa, saaxibbadii iyo dhammaan dhegeystayaasha Laanta Af Soomaaliga ee BBC.
Posted at 7:37 1 Aug
Wasiirka amniga gudaha ee Maraykanka ayaa soo dhaweeyay go’aanka uu Facebook ku xiray in kabdan soddon ciwaan oo u muuqday in loogu talogalay in lagu farogaliyo doorashada wakhtiga dhexe ee dalka Maraykanka.
Kirstjen Nielsen ayaa sheegay in iskuday kaste oo lagu farogalinayo doorashada uu yahay weerar lagu qaaday dimuqraadiyadda, isla markaasna uusan Maraykanku u dulqaadan doonin farigalin noocaas ah.
Facebook ayaa tiray in kabadan toban kun qoraallo ah iyo 150 shay oo xayaysiin loo sameeyay.
Bartan ay bulshadu ku xiriirto ayaa sheegtay in aysan hubin isha hawlgalkaas, balse qaar ka mid ah qoraallada been abuurka ah lala xiriiriyay ciwaanno ay adeegsan jireen aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlin.
Posted at 7:20 1 Aug
Afar ruux oo oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka degdegga ah bixiya oo lagu eedeeyay in ay midab takoor dartii gargaar caafimaad u siin waayeen haweenay dhimanaysa ayaa wajahaya dhagaysi dhanka anshaxa ah maalinta Talaadada.
Crystle Galloway hooyadeed ayaa sheegtay shaqaalaha caafimaadka ee Tampa ee gobolka Florida ay iska qiyaasteen in qoyskaas aysan awoodi karin kharashka ambalaasta.
Hooyada dhashay haweenaydan 30 jirka ah ayaa markaas go'aansatay in ay gaarigeeda ku gayso isbitaalka, intii ay sii wadayna Crystle ayaa miyir daboolan tay markii uu dhiig kar ku soo booday, waxayna dhimatay shan maalmood ka dib.
Masuuliyiinta deegaanka Hillsborough ayaa haddaba aqbalay masuuliyadda.
Posted at 7:12 1 Aug
Denmark oo mamnuucday Indho shareerka
Dalka Denmark waxaa maanta ka dhaqan galay mamnuucitaan lagu soo rogay in bulshada dhexdeeda lagu xirto indho shareer.
Tallaabadaas waxaa meel mariyay baarlamaanka Denmark bishii May ee sannadkan.
Galinka dambe ee maanta ayaa la qorshaynayaa in uu dhaco mudaaharaad lagu diidan yahay arrintaas oo ay ka qayb qaadanayaan dumar Muslimiin ah iyo kuwo aan Muslimiin ahayn, iyaga oo ka dhago adaygaya sharcigan cusub.
Booliiska ayaa awood u leh in ay dumarka niqaabka qaba ka dalbadaan in ay ka tagaan goobaha ay bulshadu wadaagaan.
Saraakiishuna waxay xaq u leeyihiin in ay dul dhigaan ganaax 160 doolaar ah marka koobaad ee dambiga la galo.
Haddii uu ruuxu afar jeer sharcigaas jabijana waxaa lagu ganaaxi karaa 1500 oo doolar.
Faransiiska iyo dalal kale oo Yurub ku yaalla ayaa horay u qaaday tallaabooyin ka dhan ah in bulshada lagu dhex xirto niqaab.
Waa maalin Arboco ah oo ay taariikhdu tahay 1 bisha Agoosto ee 2018.